साउदी अरेबियामा अड्किएका ३ वटा शव नेपाल ल्याइँदै « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
साउदी अरेबियामा अड्किएका ३ वटा शव नेपाल ल्याइँदै
काठमाडौं -साउदी अरेबियामा लामो समयदेखि अड्किएका ३ जना नेपालीको शव नेपाल आउने भएको छ । साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासको सक्रियतामा उनीहरूको शव नेपाल पठाउने टुंगो लागेको साउदीस्थित नेपाली राजदूत प्राध्यापक महेन्द्रप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । ‘सोमबार साउदी अरेबियाका श्रममन्त्री डा. अलि बिन अल गाफिससँग मैले औपचारिक भेट गरी मृत्यु हुनेहरूलाई दिन बाँकी रहेको बक्यौता कम्पनीबाट असुल गर्ने गरी शव नेपाल पठाउने सहमति भएको छ,’ राजदूत प्रा. सिंहले बताए ।
मृतकहरू पदमबहादुर केसी, रमेश विक र भीमबहादुर केसीको शव नेपाल पठाउने विषयमा मन्त्रीसँग सहमति भएको उनले जानकारी दिए । ‘मृतक पदमबहादुर केसीका लागि ५३ हजार साउदी रियाल (करिब १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ)को चेक तयार भएको छ,’ राजदूत सिंहले बताए । त्यस्तै, रमेश बिकको सन्दर्भमा भने साउदीस्थित उनको कफिल (स्पोन्सर)को सिस्टम नै त्यहाँको श्रम कार्यालयले बन्द गरिदिएपछि उसले नै बक्यौता रकम दिएर शव पठाउन तयार भएको उनले जानकारी दिए । भीमबहादुरको सन्दर्भमा भने तत्कालका लागि नेपाली दूतावासले खर्च बेहोरी शव पठाउने र बिलबमोजिमको रकम उनले काम गर्ने कम्पनीले पछि दूतावासलाई दिने सहमति भएको राजदूत सिंहले बताए । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
श्रम सम्झौताको विषयमा छलफल
साउदी अरेबियाका श्रममन्त्री डा. अलि बिन अल गाफिस र उपमन्त्री डा. अब्दुल अजिजसँगको छलफलमा दुई मुलुकबीच जतिसक्दो छिटो श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको राजदूत प्रा. सिंहले जानकारी दिए । त्यसका लागि दुईपक्षीय छलफललाई थप सघन बनाउने सहमति भएको पनि उनले बताए । साउदी अरेबियामा लाखौँको संख्यामा नेपाली कामदारले काम गरिरहेको भए पनि औपचारिक श्रम सम्झौता भने हुन सकेको छैन ।
साउदी अरेबियामा ३ लाख ६५ हजार नेपाली कामदार
साउदी अरेबियामा ३ लाख ६५ हजार ७ सय १४ कामदार रहेका छन् । नेपाली राजदूतको मन्त्रीसँगको भेटमा साउदी सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारको अद्यावधिक तथ्यांकसमेत उपलब्ध गराएको हो ।
यसअघि साउदीमा कति कामदार छन्, त्यसको आधिकारिक तथ्यांक थिएन । त्यहाँ रहेका कुल कामदारमध्ये ३ लाख ६० हजार २ सय ७६ ले निजी कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् भने ५ हजार ४ सय ३८ जना घरायसी कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् । साउदी अरेबियामा रहेका ३३ सय ७९ महिलामध्ये २५ सय २२ जना घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् । साउदी सरकारको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष त्यहाँ कुल ३ लाख ८६ हजार ९ सय ४ जनाले काम गरिरहेका थिए ।